श्रीमानका यी साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती(परदेसी मित्रहरूले अवश्य पढ्नुहोस) - Timesnepal
गज्जबको सरकारी निर्णय : कोरोना भाइरस संक्रमितलाई डेढ लाख भत्ता (भिडियो सहित)
कसरी लि’क भएर आयो नेपाली के’टिको यस्तो चर्ति’कला(भि’डियो सहित)
अनुहारमा सँधै चमक ल्याउन यसरी बनाउनुहोस् लाभदायी घरायसी प्याक (भिडियो सहित)
तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन,अपनाउनुस यि ४ उपाय जसले बन्नुहुनेछ करोड पति
हैट के जमाना आउँन थाल्यो कलेजको ड्रेस मै यस्तो !! पुरा भिडियो हेर्नुहोस
Complete Nepali news portal
श्रीमानका यी साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती(परदेसी मित्रहरूले अवश्य पढ्नुहोस)
August 1, 2020 August 2, 2020 admin	0 Comments
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती, आइरहेका छन् ।सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कुम्ल्याएर अर्कैसंग भागेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं ।
प्रायः आफ्नै लापर’बाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पी’डितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ ।आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु ग’लतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् ।नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् ।
उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छदिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा गलत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।श्रीमिति लार्इ कत्ति पनि फ्री नछोड्नुहोस् । श्रीमतीका हरेक भनाइमा चनाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ । धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन ।घरमा एक्लै नछाड्नुहोस्, आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतिलाई घरपरिवारसंगै राख्नुहोस् ।
सक्नुहुन्छ गाउँमै लगेर राख्नुहोस् । आमा बाबुसंग, शहर केन्द्रित ठाउँमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यदी शहरमा राख्नै पर्ने बाध्यता भए उनीप्रति चनाखो बन्नुहोस् । उनको बारेमा जानकारी लिने माध्याम बनाएरै जानुहोस् ।आमाबाबुको सबै कुरा सुन्नुपर्छ । बुहारी भित्र्याएपछि सासु बुहारीको झगडा परे पनि यो क्षणिक श्रीमान श्रीमतिको झ’गडा जस्तै हो । बुहारीसंग सासु नबोली पनि ती तपाईकी आमा हुन् । उनले तपाईको कहिल्यै कुभलो चिताउँदिनन् । त्यस्तैले श्रीमतीलाई भन्दाबढी आमा बाबुलाई बढी विश्वास गर्नुहोस् । श्रीमतीको विश्वासमा घरबार बि’गार्नेहरुको नै आफ्नै घरबार धेरै बि’ग्रिएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
जति भए पनि श्रीमतीको नाम मा पठाउनु हुन्छ र कुनै हिसाब र जानकारी लिनु भएको छैन ? यी प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छअर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ? ठा’डो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रिसाएर फोन का’ट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै एकासी झ’र्किने ,रिसा’उने गर्छन भने शं’का गर्नैपर्छ । असल श्रीमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ ।
यदी सामान्य कुरो मै फोन काट्ने , झ’र्किने गरिन भने सम्झनुस कुनै चक्कर चल्दै छ, जहाँ अब तपाई को फोन नआउदा पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था भैसकेको छ ।घरमा पैसाको कारोबार कसले गर्छ ? श्रीमती या बाबा आमाले ? या जति भए पनि श्रीमतीको नाम मा पठाउनु हुन्छ र कुनै हिसाब र जानकारी लिनु भएको छैन ? यी प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । श्रीमती हो अर्काको घरबाट मलाई नै भनेर आई, यसको अब म बाहेक अरु कोही छैन भनेर कहिल्य भावनामा नबग्नुहोस् । बरु तपाई एकपटक आफ्नो दुःखको कमाइलाई सोच्नुहोस् ।
मैले कमाएको पैसा यसै उडेको त छैन कतै ? त्यसैले श्रीमतिलाई अभावमा बाँ’च्न सिकाउनुहोस् । अभाव भन्दैमा सारो कष्ट भने दिनुहुँदै । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतिलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने सोच्नुहोस् तपाईको लगानी बालुवामा पानी अवश्य हुन्छ ।
अर्को चनाखो हुनुपर्ने प्रश्न हो श्रीमती कतिको चुलबुले छिन् ?कुनै जागिर गर्नु हुन्छ या जागिर गर्ने बहाना गर्दै छिन् ? श्रमती चुलबुले छिन् भने अलि ख्याल गर्नु होस् , किन कि महिला हरु जति चुलबुले हुन्छन । उतिनै यौ’न प्यासी पनि हुन्छन् , कुनै जागिर गर्नु भएको छ या छैन । कस्तो खाल्को जागिर हो , जानकारी लिनुहोस् , यहाँ यस्तो पनि देखिनमा आएको छ श्रीमती जागिरमा जाने भन्ने उल्टो आफ्नो पैसो खर्च हुने । यो अवस्था घरबार बि ग्रिएको अवस्था हो ।
अर्को कुरा तपाई विदेशमा गइसकेपछि बेला बेलामा श्रीमतीको मोबाइमा फोन गर्दै गर्नुपर्छ । तपाईलाई थाहै नहुने अर्को नम्बर पो चलाएको छ की यी सबैकुरा ख्याल गर्नुपर्छकिन कि जब अनेक थरि बहाना गरि श्रीमती बाहिरिन खोज्दैछिन् भने अब तपाइँ आफै बुज्नु पर्ने कुरो हो, तपाई बिदेश हुँदा हुँदै यस्तो बहाना गर्छिन भने , त्यहाँ कुनै ठूलो योजना बनि सकेको हुनुपर्छ । सबै जागीरमा जाने श्रीमतिमा यो कुरा लागू नभए पनि यस्ता विषयमा चनाखो चाही अवश्य हुनुपर्छ । यसका लागि कहिले काँही जागीर गर्दैछन् भने अब जागिर नगर मेरै कमाईले पुगिहाल्छ नी । भनेर उनको मनको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नु उत्तम मानिन्छ ।
यो सबैमा महिलामा लागू नहुने भए पनि पछिल्लो केही यस्तो घ’टना घ’टेका छन् । जुन तपाई हामीले सामाचारमा सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । त्यसैले आफू सचेत भइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि कुनामा गए पनि तपाईले आफ्नो घर परिवार सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ । एजेन्सी
← भर्खरै कोशी बाँध फुट्यो – हेर्दाहेर्दै भारत डुब्न थाल्यो! अहिलेसम्मकै डेन्जर बाढी (हेर्नुहोस भिडियो)
श्रीमान-श्रीमती कसरी सुत्ने ? जान्नुहोस् ७ नियम →
बाह्र बर्षीय बिधार्थी र ३४ बर्षीय शिक्षिकाको अनौठो प्रेम ! थाहा पाहुँदा दुनियाँ नै चकित परेपोछि…पुरा पढ्नुहोस
प’रि ता’माङ को नया से’क्सी भि’डियो आयो हेर्नुहोस(भिडियोसहित)
महिलाहरुले नहेर्दिनुहोला यो भिडियो…पुरुषले १ पल्ट अबस्य हेर्नुहोस्
Copyright © 2020 Timesnepal. All rights reserved.